သားအဖသုံးယောက်ပေါင်းပြီး ဂီတဖျော်ဖြေပွဲလေးလုပ်မယ့် အိမ့်ချစ် | Duwun
သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့မှာ FG live Lounge လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အိမ့်ချစ်ရယ်၊ ဖခင်ဖြစ်သူ အဆိုတော်ချစ်ကောင်းရယ်၊ မောင်လေးဖြစ်တဲ့ ဂျူနီယာ ချစ်ကောင်းရယ် ပေါင်းပြီး ဖျော်ဖြေပွဲလေးတစ်ခုလုပ်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ သီဆိုသွားမယ့် ဂီတသံစဉ်တွေကြားမှာ ပရိသတ်တွေ ပျော်စေရမယ်လို့လည်း အိမ့်ချစ်က ပြောပါတယ်။
အိမ့်ချစ်က သားအဖသုံးယောက်ပေါင်းပြီး ဂီတဖျော်ဖြေပွဲလေးတစ်ခု လုပ်မယ်လို့ဆိုလာပါတယ်။ တစ်ယောက်ရဲ့ သီချင်းကို နောက်တစ်ယောက်က သီဆိုဖျော်ဖြေသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
‘’August 24th မှာ ချစ်ကောင်း အိမ့်ချစ် ဂျူနီယာချစ်ကောင်း တို့ရဲ့ FG live Lounge..!! ချစ်ကောင်း သီချင်း အိမ့်ချစ်ဆိုမယ်..! အိမ့်ချစ် သီချင်း ချစ်ကောင်းဆိုမယ်..! ချစ်ကောင်း သီချင်း ဂျူနီယာဆိုမယ်..! အိမ့်ချစ် သီချင်း ဂျူနီယာဆိုမယ်..! တစ်ယောက်စီရဲ့ဖျော်ဖြေမှုတွေပါမယ် နှစ်ယောက်တွဲတွေလဲဆိုကြမယ် သုံးယောက်ပေါင်းပြီးလဲဗြင်းမယ်’’ လို့ အစပျိုးကာ သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီကျော်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေ့ချ်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက် လာရောက်အားပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ သားအဖ သုံးယောက်ပေါင်းပြီး ဖျော်ဖြေသွားမယ့် ဂီတသံစဉ်တွေကြားမှာ ပျော်ရွှင်စေရမယ်လု့ိလည်း အိမ့်ချစ်က ပြောပါတယ်။
‘’LUCKY HAND Band နဲ့ Full Band, Unplugged ရသနှစ်မျိုးလုံးပေးမယ်..!! သားအဖသုံးယောက်ရဲ့သီချင်းတွေနဲ့ လာတဲ့ပရိတ်သတ်တွေကိုပျော်စေရမယ်။ သားအဖသုံးယောက်ရဲ့ မေတ္တာတွေနဲ့ လာတဲ့ ပရိတ်သတ် တွေကိုလွှမ်းခြုံမယ်..!! လက်မှတ်တွေရှေ့တစ်ပတ်ထဲစတင်ရောင်းချတော့မှာပါရှင့်.! FG Live Lounge Page မှာအသေးစိတ်ကြော်ငြာပေးသွားပါမယ်..!!’’ လို့ ဆက်လက်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
အိမ့်ချစ်ရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ ချစ်ကောင်းကလည်း ပရိသတ်အချစ်တော် အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို၊ အိမ့်ချစ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း လက်ရှိအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မောင်လေးကိုလည်း ဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီး အောင်မြင်စေချင်တဲ့အကြောင်း ပြောပြလာပါတယ်။
‘’ ကလေးတွေကကျတော့ အဲ့ဒီမျက်လုံးတစ်လုံးကို လိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးရင် ဟာ ငါ့ကိုမကြိုက်တာလား၊ ငါ့ကို ဆင်းစေချင်တာလားဆိုတဲ့ အတွေးတွေက သီချင်းဆိုနေတာကြီးကို အရမ်းနှောင့်နှေးသွားစေတယ်။ မောင်လေးကိုလည်း အခုချိန်မှာ သင်ရတယ်။ စတိတ်မကြောက်အောင် အိမ့်ချစ်ကဆွဲဆွဲပြီးတော့ ခေါ်ပေးနေတဲ့ သဘောပေါ့။ သားအဖသုံးယောက်ဆိုရင်တော့ ဘေးမှာ အဖေလည်းရှိတယ်၊ အစ်မလည်းရှိတယ်’’ လို့ မီဒီယာအင်တာဗျူးတွေမှာ ဖြေဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။
အိမ့်ချစ်(Eint Chit) ဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက ဂီတနဲ့မစိမ်းသလို ဖခင် ဦးချစ်ကောင်းနဲ့အတူ စတိတ်စင်ပေါ်မှာ ဖျော်ဖြေလာသူတစ်ဦးပါ။ အိမ့်ချစ်ဟာ အတွဲခွေများစွာမှာ ပါဝင်သီဆိုဖူးခဲ့သလို "ကိုယ်တိုင်ရေး ပုံတူပန်းချီ" ၊ အချစ်ရေးစတဲ့ တေးသီချင်း ခွေများနဲ့ ပရိသတ်အားပေးမှု ရရှိထားတဲ့ အဆိုတော် တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးချစ်ကောင်းနဲ့အတူ "၅၂၈" ဖျော်ဖြေ ပွဲကြီးကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့ အဆိုတော်တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။